Booliska Gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku… – Hagaag.com
Booliska Gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku…
Posted on 18 Luulyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Taliyaha qeybta booliska ee Gobolka Mudug dhinaca Galmudug Qaasim Shiikh Doon ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku eedeysan inuu dil ka geystay deegaanka Garas-baalley ee duleedka Muqdisho.
Ninka ciidamada booliska Galmudug ay soo qabteen oo lagu magacaabo eedeysane Aweys Cismaan Cabdi ayaa waxaa lagu tuhmayaa dilka afar ruux iyo dhaawac shan kale. Falkaas ayaa ka dhacay Tabeellaha Shiikh Ibraahim 9kii, bishan July, 2020-ka .
Taliye Shiikh Doon ayaa waxa uu sheegay in soo qabashada ninkan tuhmanaha ay ka dembeysay kadib iskaashi dhex-maray hoggaanka ciidamada barista dembiyada booliska Soomaaliya iyo saraakiisha booliska ee Galmudug.
Dhowaan ayuu sheegay iney ku wareejin doonaan waaxda baarisa dembiyada ee booliska Soomaaliya, si cadaaladda loo horgeeyo.